China SUN-800D Ultrasound ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebu ya | Sunbright
Nkọwa ngwa ngwa:
1. Ultrasound dabeere na PC, nke nwere ike ijikọ ọ bụla na-ebi akwụkwọ na ụdị ọ bụla.
2. Wuru 3D software, enwere ike ịrụ ọrụ n'oge Nkwalite Ọhụrụ.
3. Wuru na-batrị, nke nwere ike na-na-arụ ọrụ dịkarịa ala 3 awa mgbe ike anya.
4. kindsdị akụkọ akpaaka na nha maka OB / GYN, gbasara obi, urology, obere akụkụ, akwara, vaskụla, wdg.
5. Nnukwu Ikanam nyochaa na 15 sentimita asatọ.
6. N'okpuru iji, ndị ikwu Atụmatụ ga-egosi na ala nke ngosi na-eduzi gị ọzọ ọrụ
7. Asụsụ dị iche iche: English, Chinese, Spanish, na Portuguese, Russian, Arabic, French.
8. Ikenyeneke mbiet àgwà na 175 ogo ikiri n'akuku
Nọmba nlereanya Anwu-800D
.Dị Hot Na-ere ultrasound, Ngwaọrụ Ultrasonic Diagnostic Devices
Batrị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ karịa awa 3
Ọdụ USB 2 USB ọdụ ụgbọ mmiri, Njikọta nke USB flash na laser ebi
Ọpụrụiche n'ozuzu, OB / GYN, vaskụla, obi, urinary, obere akụkụ, wdg.
Ọnọdụ onyonyo 2D, 3D aka-efu
Image / video aha AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DICOM
NGAN 8-nke TGC, ngbanwe ziri ezi nke uru / uru
Cine akaghị Ogwe 512 (Nchekwa onwe / Ntuziaka)
Ngwa nbipute Ọ bụla na-ebi akwụkwọ dị mma
Multi-asụsụ ọrụ Bekee, Chinese, Spanish, Portuguese, French
Single ngwugwu size: 26X49X49 cm
Single dị arọ: 12.500 n'arọ
Ngwugwu Type: Sea-kwesiri mbukota / Ikuku-kwesịrị mbukota maka Hot ultrakpọsa ultrasound
Ibu (nkeji) 1 - 5 > 5
Est. Oge (ụbọchị) 5 Ndi kpakorita
Hot Na-ere laptọọpụ ultrasonic flaw detector price ultrasound Sun-800D
Sunbright nwere obi ụtọ ịkpọsa ya laptọọpụ-sized ultrasound usoro, dịgasị iche iche site na 2D, 3D, nwa & ọcha, agba Doppler, wdg.
Kọmpat dịka kọmputa kọmpụta a na-ahụkarị, Sun-800D 3D ultrasound usorowebatara usoro ihe omumu ohuru ohuru na usoro ihe omimi nke ultrasonic, na-enye ezigbo onyonyo onyonyo, ihe ngosi mara mma na nke oma, oru ndi enyi na ndi enyi, ego di mfe, ma karie. N'ezie, ọ bụ aka nri ndị ọkachamara nke ultrasound n'ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla.
Zuru ezu Atụmatụ
Dịrị ihe na-erughị 5 kgs, jiri nkasi obi buru ma laa.
Batrị etinyere, oge ọrụ karịa awa 3, na-agbatị ebe nlekọta na saịtị ebe isi mmalite ike adịghị.
Ọ bụghị naanị na usoro ultrasound ọkachamara, nwekwara ike ịbụ kọmputa laptọọpụ mgbe ị rịọrọ.
15 inch ikanam ngosi, dị ka nnukwu dị ka 175 ogo nlele anya.
8-nke TGC, ngbanwe ziri ezi nke uru / uru.
2 USB ọdụ ụgbọ mmiri, Njikọta nke USB flash na laser ebi
Discom 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, ndakọrịta na-edebe ihe ochie, PACS ma ọ bụ na-eje ozi
Projector n'ọdụ ụgbọ mmiri, a kwesịrị maka nkuzi ma ọ bụ ọzụzụ
Nyocha dịgasị iche iche: convex, micro-convex, endo-cavity / rectal, linear, olu
Ọpụrụiche: izugbe, OB / GYN, vaskụla, obi, urinary, obere akụkụ, wdg.
Diskpụrụ ngosipụta; B, 2B, 4B, B / M, M
Ọnọdụ onyonyo: 2D, aka 3D n'efu
Ihe onyonyo / onyonyo: AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DICOM
3.5MHz R60 / R50 convex nyocha; otutu-ugboro site na 2.0MHz ruo 5.0MHz
7.5MHz L40 nyocha nyocha; otutu-ugboro site na 5.0MHz na 10.0MHz
6.5MHz R10 / R13 nyocha transvaginal; otutu-ugboro site na 5.0MHz ruo 8.0MHz
3.5MHz R20 gbasara obi; otutu-ugboro site na 2.0MHz ruo 5.0MHz
Dynamic frequency scanning si 2.0 ka 12.0Mhz, 4 ọtụtụ ugboro nyocha
Mgbanwe di omimi
≥100dB, usoro 4 nke ịgbanwe ọrụ
Teknụzụ usoro ihe oyiyi
njikwa enwere ike ịchịkwa ya, mmezi Gamma, mmelite ihu, ime ka onyonyo kpụ ọkụ n'ọnụ, denoisiong oyiyi, mmezi akpaaka akpaka, elu / ala, aka ekpe / aka nri na mkparịta ụka ojii na ọcha.
stepless magnification, ike ezigbo oge PIP mpaghara mbugharị ọrụ
512 etiti akpaaka / ntuziaka cine akaghị; multi ihuenyo cine loop (4B, 9B); akpaaka / akwụkwọ ntuziaka cine loop n'okpuru ọnọdụ B / M na M.
Sistemụ njikwa foto
ọrụ nke nduru, nchọgharị, ịtụle, ịchekwa, mbipụta na ịnyefe ihe oyiyi; ihe ruru ọtụtụ narị puku ihe oyiyi na ọtụtụ puku cine loop nwere ike ịzọpụta; enwere ike iji onyonyo echekwara ga - arụ ọrụ site na ihu onyonyo.
Ihe atụ na ngụkọta oge
tụọ perimeta na mpaghara site na anya ma ọ bụ usoro ellipse; tụọ perimeta na mpaghara site usoro egwu; tụọ usoro ahụ na oke site na usoro ellipse. 4 atụ osisi; ọnụego ya; linear stenosis ratio, ebe stenosis ruru, n'akuku ezu. Nkọwa niile bụ akpaka.
Nyere ngwaọrụ aka
mgbapu ndu, distogram, sectional ịbịaru
Nchịkọta jikwaa interface
ozugbo nkwado ntanetị na usoro ikpocha igodo, usoro esetịpụrụ na ọrụ njikarịcha otu.
Nchekwa onwe-ihe nke OB., Gyn., Obere akụkụ, obi obi, urology na ndị ọzọ
Gyn.: eriri akpa nwa, intima ọkpụrụkpụ, ovary colume, regantic ovarian follicle, ogologo nke cervix ogologo-dayameta, Eriri akpa nwa.
Obere akụkụ: thyroid gland, hip nkwonkwo.
Gbasara obi: AOD, AK, IVSTd, LVIDd, AA, LAD / AOD, LVPWd, LVIDs, EF, EF SLP, CA / CE, MVCF, CO, CI, LVMWI, AVSV, FS, ACV, ET, SV, SI, LVMW .
Urology: nọgidere na-amị mamịrị, prostate, PSAD.
Usoro usoro nchekwa data gbasara ọrịa. Enwere ike ịchekwa data niile, chọọ ma jikwaa.
Ọtụtụ ụdị OB. akụkọ mmuta, akara ugo mmụta nwa nke nwa ebu n'afọ na akuko na usoro uto nwa ebu n'afọ.
Ogologo ọdụ ụgbọ mmiri metụtara
VGA, S-Video, Oghere vidiyo vidiyo
Ogwe USB2.0, kaadị nchekwa 2G
RJ-45 ọdụ ụgbọ mmiri
Otutu di iche iche nke ichekwa ụdịdị niile na-akwado, nwere adụ disk, diski ike, flash disk, CF kaadị, SD kaadị na ndị ọzọ.
Kwekọrọ n'Ozizi nke onye na-ebipụta jet, onye nbipute laser, onye nbipute vidiyo na ndekọ vidiyo
Atetị usoro maka nyocha na usoro nhazi. Enwere ike ịhazi usoro dị iche iche dị iche iche.
Nke gara aga: Anyi-906C Agba Doppler
Osote: Anyanwụ-808F Ultrasound
Single ojiji infusion mgbapụta SUN-500 ọnụ ala icu n'ọdụ ụgbọ mmiri ...
Hospira infusion mgbapụta Top n'ire mmeri maka ...
CE ikwughachi igwe phased n'usoro nyocha Trolley colo ...
ECG Machine 6 Channel 12 Ihu Igwe Ihuenyo